Build Your Career | Prudential Myanmar
ရင်းနှီးမှုအဆက်အသွယ်တွေနဲ့အတူ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်ကို တည်ဆောက်လိုက်ပါ
လူအများနဲ့ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝဖို့၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိဖို့၊ အံ့အားသင့်စရာ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ပြန်လည် ရရှိဖို့ စတာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် ဘဝခရီး လမ်းကြောင်းတစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ လက်တွဲလိုက်ပါ။
ပရူဒန်ရှယ်အာမခံရဲ့ အကြံပေးသူတစ်ဦးရဲ့ အလုပ်တာဝန်က ဘာများလဲ?
ကျွန်ူပ်တို့ရဲ့ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု အကြံပေးတွေက သူတို့ရဲ့ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု အတွေ့အကြုံ၊ အသက်အာမခံလုပ်ငန်း နယ်ပယ်အတွင်း ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို အသုံးချပြီး တခြားသူတွေကို သူတို့အနာဂတ်နဲ့ သူတို့ချစ်ရတဲ့ မိသားစု၊ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရသူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လို အစီအစဉ်ချသင့်လဲဆိုတာ ကူညီအကြံပေးရပါတယ်။
Why join Prudential asaFinancial Advisor?
We value ideas, change and team effort. We offeradiverse set of development and management training programmes for our team in addition to fulfilling rewards so you can always be the best you can be.
သင်ဒီမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်